कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकमाथि हातपात- समाचार - कान्तिपुर समाचार
माघ ६, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कोभिड आईसीयूमा कार्यरत डा. सविन भण्डारीलाई कुटपिट गरिएको छ । कोभिड आईसीयूमा उपचाररत ६१ वर्षीय बिरामीको मृत्यु भएपछि उनका छोराले चिकित्सकमाथि हातपात गरेको शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा कार्यरत डा. सचित शर्मा रुपाखेतीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार निमोनियाको कारण बुटवलबाट शिक्षण अस्पतालमा रिफर गरिएका ती बिरामीको बुटवलमै गरिएको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ थियो । 'प्रारम्भिक रुपमा कोरोना निगेटिभ भएका कारण उहाँलाई अस्पतालको ननकोभिड आईसीयूको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार सुरु गरिएको थियो,' उनले भने, 'तर हिजो भाइरल इन्फेक्सनको शंकापछि इन्फ्लुएञ्जाको परीक्षण गर्न टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना पठाएका थियौं । त्यहाँ परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ रहेको खबर आयो । त्यसपछि हामीले उहाँलाई कोभिड आईसीयूमा सारेका थियौं ।'
डा. रुपाखेतीका अनुसार उपचारको क्रममा बिरामीको निधन भएपछि उनका छोरा चिकित्सकमाथि जाइलागेका थिए । 'हामीले बिरामीका आफन्तलाई सुरुदेखि नै अवस्था चिन्ताजनक छ भनेर जानकारी गराएका थियौं । तैपनि उहाँहरु आक्रोशमा आउनुभयो,' उनले भने, 'अस्पताल प्रशासनले हातपात गर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ । उहाँहरुले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्नु भएको छ । तर, हामीले प्रशासनलाई कानुनी कारबाही नै आगाडि बढाउन भनेका छौं ।'
उनका अनुसार चिकित्सकलाई हातपात गर्ने मृतकका छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर लगे पनि अहिले माफी माग्नका लागि आफन्तहरुले उनलाई अस्पतालमा ल्याएका छन् ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७७ १७:४३
‘हिजोका आन्दोलनका घाइतेहरुको घाउ आलै छ । अब फेरि हिंसात्मक आन्दोलन हुनु हुँदैन ।’
‘सुवास नेम्बाङलाई यति निरीह कसले बनायो ?’
काठमाडौँ — पत्रकार नारायण वाग्लेले प्रतिनिधिसभाविरुद्धको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री फेर्ने साधन बनाए जनता सडकमा नआउने बताएका छन् । प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै वाग्लेले आन्दोलनको उद्धेश्य प्रतिगमन लखेट्नुपर्ने हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘अहिलेको आन्दोलन प्रधानमन्त्री फेर्नकै लागि मात्र हो भने जनता सडकमा आउँदैनन् । यदि प्रतिगमन लखेट्ने आन्दोलन हो भने तपाईंहरुले भन्न सक्नुपऱ्यो केका लागि आन्दोलन हो,’ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत पार्टीका नेताहरुलाई सचेत बनाउँदै वाग्लेले भने ।
साथै अबको आन्दोलन मांसाहारी हुनुपर्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइप्रति पनि वाग्लेले आपत्ति जनाए । ‘हिजोका आन्दोलनका घाइतेहरुको घाउ आलै छ । अब फेरि हिंसात्मक आन्दोलन हुनु हुँदैन । त्यो राम्रो होइन, त्यसले प्रतिगमनलाई नै सक्रिय बनाउँछ । सत्ताले आन्दोलन नै भड्कियोस् भन्ने चाहन्छ । सत्ताबाट थप दमनको सम्भावना भएकाले नेतृत्वबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ,’ वाग्लले भने ।
त्यस्तै अर्को प्रसंगमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ यतिबेला सबैभन्दा निरीह पात्रका रुपमा देखा परेको पनि वाग्लेले टिप्पणी गरे । ‘आज नेपालमा सबैभन्दा निरीह दुई कार्यकाल संविधानसभाका अध्यक्ष भएका व्यक्ति देखिएका छन् । ती व्यक्ति कसरी यति निरीह भए, कसले बनायो यति निरीह ?,’ वाग्लले प्रश्न गरे ।
त्यस्तै प्रतिपक्ष दल पनि अहिले निरीह देखिएको टिप्पणी गर्दै पत्रकार वाग्लेले भने, ‘आजको प्रतिपक्ष नेतृत्व किन लाचार छ ? प्रतिपक्ष दलको नेता प्रधानमन्त्रीको दैलोमा चाहर्नुपर्ने बाध्यता के हो । तपाईंहरुको संघर्ष त केबल कुर्सीका लागि हो भन्ने हामीले बुझिरहेका छौं । के यो लोकतन्त्र हो ?’ प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको कोठामा हात फैलाएर जानुपर्ने कुरालाई लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलन कायम भएको मान्न नसकिने पनि वाग्लेको भनाइ थियो ।
हिजोको जनआन्दोलनमा गरिएका वाचाहरुमा कहाँकहाँमा नेतृत्व कहाँकहाँ चुक्यो भन्ने कुरा उल्लेख गरी आन्दोलनरत पार्टीहरुले बडापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
आफू सक्रिय पत्रकारितामा रहँदा सधैँ जनताका आवाज उठाउने गरेको उल्लेख गर्दै पत्रकार वाग्लेले भने, ‘पहिले म सक्रिय पत्रकार थिएँ, अहिले मसँग पत्रिका नभएकाले म माइक समात्न गएँ । हामीहरु माइतीघरबाटै प्रतिगमनविरुद्ध खबरदारी गरिरहेका छौं ।’
उनले नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुले पनि केपी शर्मा ओलीले गलत कदम चालिरहँदा किन खबरदारी नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । देश र नागरिक कोरोना महामारीले आक्रान्त हुँदा संसद् बैठक आह्वान नगर्ने भन्दै वाग्लले आक्रोश व्यक्त गरे । अहिले संविधान मृत अवस्थामा रहेको र नेतृत्वले अब यसलाई ब्युझाउँने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
प्रकाशित : माघ ६, २०७७ १७:२६